CNC Turning Center, CNC Lathe Machine, Mutengesi & Vagadziri China
Muri pano: Kumba1 / CNC Turning Center, CNC Lathe Muchina, Mutengesi & Vagadziri C ...
YEMAHARA PRECISION MULTI AXIS CNC YAKANYUKA MUZINDA
Tsinfa inyanzvi yekutengesa & inogadzira yeCNC yekuchinja muchina muChina. Iyo CNC inoshanduka nzvimbo ine yakazara mabasa, yakakwira machining mhando, uye yakakwira kumhanya. Inonyanya kushandiswa kugadzirisa zvikamu zve rotary, kazhinji zvinokwanisa kupedzisa iyo cylindrical pamusoro, conical pamusoro, idenderedzwa pamusoro, kuchera, kugaya groove, uye kugadzirisa shinda, zvakare inogona kugadzirisa imwe yakaoma yakatenderera pamusoro, senge hyperboloid. Multiple axis inogona kuwedzerwa zvichienderana nezvinodiwa: c akabatana lathe, 3 axis lathe, 2 axis lathe, 5 axis CNC lathe, 4 axis CNC lathe.
Kubudirira kwepamusoro: Muchikamu cheCCC chekushanduka, mushure mekunge workpiece yasungwa kamwe chete, inogona kupedzisa zvikamu zvekutendeuka, kuchera, kuchera, hinge, kugadzira shinda, uye mamwe maitiro ekugadzirisa.
Kusimba kwakasimba: Mubhedha unonyanya kurapwa kubvisa kunetseka kwemukati.
High nemazvo: Iyo CNC lathe inoshandisa zvakananga servo mota kuti ione iyo yekufambisa kufamba kuburikidza nebhora sikuruu dhiraini ndiro uye chishandiso zororo, saka chikafu chehurongwa chimiro chakareruka kwazvo.
Mibvunzo? kana unoda mutengo?Tipe isu kufona pa + 86-15318444939, uye taura nemumwe wehunyanzvi reps.Iwe unogona zvakare kuzadza yedu: fomu rekutaurirana.
CNC yakatwasuka kutendeuka muchina wekutengesa:
TFA40 CNC yekuchinja muchina
Rotary dhayamita 400mm, 30/45 dhigirii kurereka mubhedha, iri nyore chip kubviswa, yakasimba kuomarara
TFA40-S CNC kutendeuka pakati 3 akabatana
8 chiteshi chekodhi shongwe, chigayo, kuchera, kutendeuka, kunogona kugadziriswa, CNC chirongwa
TFA40B slant mubhedha CNC lathe 2 akabatana
Iyo dhiramu dhayamita ndeye 400mm, iyo yekugadzirisa kureba iri 500-1000mm, uye chip chip kubvisa muchina unogona kushandiswa otomatiki chip kubviswa.
TFA-8S CNC kutendeuka pakati 4 akabatana
8 chiteshi chekushandura chishandiso, Four 90 Angle magetsi misoro, Makumi 0 Angle magetsi misoro
TFA50 CNC yekuchinja nzvimbo
LTK akateedzana mubhedha wakadzika CNC lathe muchina
yakachipa mutengo, dhayamita 360-16000mm, machining kureba 500-5000mm,
CNC kutendeuka muchina vhidhiyo:
Tinogona gadzirisa maererano nezvaunoda, nesu kuti mhinduro uye chitaurwa
Kubatsira kweCNC kutendeuka muchina:
Yakakwirira degree of otomatiki: CNC system yekutonga, zvinoenderana neyakagadziriswa tekinoroji yekugadzirisa, akawanda maitiro anopedzwa panguva imwechete. Inogona kuve yakagadzirirwa ne hydraulic chuck, hydraulic muswe chigaro uye robhoti ruoko rwekuzvitakudza kurodha uye kudzikisa kugadzirisa, iyo inoponesa zvakanyanya basa uye inovandudza kugadzirwa kwekuita.
Yakakodzera chip kubviswa: sarudzo yekuregedza mubhedha, simbi chip inowira mukati meiyo chip yekuunganidza bhokisi, inogona kuitiswa kuburikidza necheni yeplate conveyor chip kubviswa.
Kuchengeteka kwakanaka: kuchengetedzwa kwakazara kwakazara kunoitwa.
High kumhanya: Chokurukisa yavose sezvavakatarirwa kumhanya inowanikwa kubva 1600 kusvika 4500 Rpm
Chii chinonzi cnc kutendeuka nzvimbo?
Kwakajairwa hupfumi CNC lathes ane maviri masanhu, X uye Z. Turning nzvimbo ine akawanda masanhu, 3 matemo, 4 matemo, mashanu matemo, zvichingodaro. Kuwedzera kune basa rekutendeuka uye rekugaya, ine basa rekukwirira kushanda. Iyo yekuchinjisa nguva uye nguva zvinoderedzwa.
Kupfupisa, iyo CNC yekuchinja nzvimbo ine zvinotevera hunhu:
(1) Kugadzikana kwakasimba, inokodzera kugadziriswa kwezvikamu zvakasiyana-siyana uye zvidiki-batch zvikamu.
Mune echinyakare otomatiki kana semi-otomatiki lathe kugadzira chikamu chitsva, kazhinji chinoda kugadzirisa muchina chishandiso kana muchina chishandiso zvishandiso, kuitira kuti zvive nyore kushandisa.
Muchina wekushandisa unoenderana nezvinodiwa zvekugadzirisa zvikamu, uchinge uchishandisa CNC lathe yekugadzirisa zvikamu zvemhando dzakasiyana, zvinongoda kugadzirisa kana kugadzirisa mashandiro
Iyo chirongwa (software) inogona kukurumidza kusangana nezvinodiwa zvekugadzirisa uye kupfupisa zvakanyanya iyo yekugadzirira nguva yekutsiva muchina Hardware
Inokodzera yakawanda-dzakasiyana, chidimbu chimwe chete, kana diki-batch kugadzira.
(2) Yakakwira machining kunyatso uye kuenderana kwakanaka
Nekuda kwekubatanidzwa kwemhando yepamusoro uye nyowani matekinoroji senge muchina nemagetsi, iko kurwisa nemazvo kweCCC maturusi emuchina kunowanzo kuve kwakakwirira kupfuura kweavo vese michina maturusi. Kuvandudza kweCNC muchina maturusi.
Iyo machining maitiro inodzorwa nekombuta zvinoenderana neyekutanga yekuisa chirongwa, iyo inodzivirira yakashata tekinoroji nhanho yeanoshanda.
Musiyano wehunhu hwechigadzirwa unokonzerwa nemisiyano. Kune mamwe ekushandira ane maumbirwo akaomarara, zvinenge zvisingaite kuti zvishandiso zvemuchina zvivapedze.
Asi iyo CNC muchina wekushandisa unonyora chete chirongwa chakaomesesa kuve chinokwanisika kuzadzisa chinangwa, pazvinenge zvichidikanwa zvakare chingashandise komputa-yakabatsirwa chirongwa kana komputa kuverenga
Computer-yakabatsirwa kugadzira. Uye zvakare, iyo machining maitiro eiyo CNC muchina chishandiso haina kukanganiswa nekuchinja kwemuviri uye kwepamoyo kweanoshanda.
(3) Iyo ine yepamusoro yekugadzira uye yakaderera yekugadzirisa mutengo
Kugadzirwa kwemuchina wekushandisa zvakanyanya kunoreva nguva inodiwa kugadzirisa chikamu, kusanganisira nguva yekufambisa uye yekubatsira nguva. nhamba
The chokurukisa kumhanya uye chikafu kumhanya pamusoro lathe inogona kudzorwa zvakawanda, uye stepless havukavu murau inogona wokurera. Iyo yakanakisa yekumhanyisa kumhanya inogona kusarudzwa panguva yekugadzira.
Kuti optimize nokuveza parameters, negoho iri nani zvikuru,
Iyo yekugadzirisa mutengo yakaderedzwa, kunyanya kune zvikamu zvekugadzira kwakawanda, iyo yakakura batch, iyo yakaderera iyo yekugadzirisa mutengo.
Zvekugadzirwa kwakawanda, kunyanya kugadzirwa kwemazhinji, kugadzirisa mashandiro uye kugona kunofanirwa kusimbiswa pane fungidziro yekuona mhando yekugadzirisa
Iko kudzikama kwemaitiro, kugadzirwa kwayo tekinoroji uye imwechete diki batch zvakasiyana. Semuenzaniso, yakasarudzika sarudzo, chishandiso nzira kurongeka, uye chishandiso kurongeka
Iyo nzvimbo uye kurongeka kwekushandisa kunofanirwa kunyatso kutariswa, uye zvirimo zvirimo zvichaunzwa muchikamu chinotevera.
Izvo zvinopesana nekugadzirwa kwemazhinji chinhu chimwe-chidimbu kugadzirwa. Chinhu chakakosha kwazvo cheimwe-chidimbu kugadzirwa ndeyekuona yekutanga yekupasa chiyero, kunyanya iyo-yega mhando.
Zvikamu zvine maumbirwo akaomarara uye akakwana kunyatsoita zvinodiwa. Chechipiri, ichienzaniswa nebudiriro yehuwandu hweye-chidimbu chigadzirwa. Imwe-chidimbu kugadzirwa
Maitiro eNC anoshandiswa akasiyana neakawandisa kugadzirwa mune echishandiso chishandiso nzira, chishandiso kurongeka, uye chishandiso chinja poindi marongero. Uye kugadzirwa kwematch
Inofananidzwa nekugadzira, imwechete-chidimbu dhizaini inofanirwa kudzivirira yakanyanya kugadzirwa nguva yekugadzirira nguva.
Ndedzipi mhando dzekutendeuka nzvimbo?
Yekutendeuka nzvimbo inowanzoreva kuwedzerwa kweanoverengeka miseve pane iyo CNC lathe, kuitira kuti iyo lathe isangove ine yekutendeuka basa chete asi zvakare iine basa rekugaya. 3 akabatana wekushandura muchina, 4 akabatana, 5 akabatana.
Maererano angled pamubhedha kurereka, rinogona rakakamurwa sandara pamubhedha nokuveza pakati uye vanofarira mubhedha nokuveza centre.
Zvinoenderana nechinzvimbo chekurukisa, inogona kukamurwa kuita yekumira kutenderera nzvimbo uye yakatenderera yekutendeuka nzvimbo.
Zvinoenderana neakasiyana madhaimari e rotary uye machining kureba, inogona kukamurwa kuita inorema kutendeuka nzvimbo uye mwenje wekutendeuka nzvimbo.
Ndekupi kuchengetedzeka kwakawanda mu cnc kutendeuka?
Mukuita kwekutendeuka pamwe neCCC yekutendeuka nzvimbo, zvinhu zvekuchengetedza zvakanyanya zvinotevera:
1.When chokurukisa anotenderera kumhanya, iyo yekucheka Urume ichaputika pane inotenderera workpiece.
2 Yekumhanyisa-inomhanya inotenderera workpiece, kune njodzi yekurambwa
3. Electric shock ngozi inokonzerwa nemagetsi leakage
4. Kukanganisa kwechirongwa, zvichikonzera njodzi yekurovera chombo.
Mukuona kwenjodzi dziri pamusoro, vashandi vanofanirwa kutevedzera gwara rekuchengetedza rekushandisa
1. Vhara musuwo unodzivirira panguva yekugadzira michina kudzivirira kutema mvura kubva pakuputika
2. Paunenge uchishandisa yakavimbika chuck, ive shuwa yekutarisa uye nekukiya iyo chuck kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge Panguva imwecheteyo, vhara musuwo unodzivirira, uye usamire wakanangana neunoshanda.
3. Kushandisa magetsi zvakachengeteka. Gadzirisa michina isina magetsi.
4 tarisa maitiro kuti uone kuti ichokwadi usati wagadziriswa.
Ndezvipi zvigadzirwa zvinogadzirwa kubva kuCCC yekugaya uye yekushandura muchina?
- Zvigadzirwa zvinogadzirwa kubva kuCCC yekugaya
Zvidimbu zvebhokisi, zvikamu zvakaoma zvepasi
Senge ese marudzi emhepo, mhepo inotungamira vhiri, idenderedzwa pamusoro, ese marudzi evhu anoumba chakuvhuvhu, propeller uye yepasi pemvura mota propeller, uye mamwe maratidziro emahara-fomu pamusoro, zvikamu zvakadaro zvinogona kugadziriswa nemachina epakati. Integral impeller, jekiseni muforoma, rabha chakuvhuvhu, Vacuum Anoumba muforoma, firiji furo muforoma, kumanikidzwa vachikanda muforoma, zvakarurama Kudzingwa muforoma, zvichingodaro
- Zvigadzirwa zvinoitwa kubva pakushandura muchina
CNC lathe inogona kugadzirisa zvigadzirwa zvakawanda, zvakaoma kunyora imwe neimwe. Muchidimbu, CNC lathe inonyanya kugadziridza zvikamu zvekutendeuka, senge shaft, ruoko, disc, nezvimwe.
Ndeupi CNC muchina unoshandiswa kutendeuka zvikamu?
Kutendeuka imhando yemachining mode umo iyo workpiece inotenderera uye mota inotyaira mubati wekushandisa uye inotya iyo yekushandisa yekushandisa. Kune akatiwandei emhando dze lathe dzinogona kuita mhando iyi yekugadzira.
CNC yakatwasuka lathe muchina, CNC yakatwasuka lathe muchina, CNC yekushandura muchina.
Ndeupi rudzi rwekushandira iri CNC lathe yakakodzera kugadzirisa?
1. Zvinotenderera zvikamu zvine yakaoma contour kana kuomarara kudzora saizi
Nekuti CNC yekutendeuka nzvimbo ine mutsara uye yakatenderera yekushandurudza basa, uye imwe CNC yekushanduka nzvimbo ine zvimwe zvisiri-tenderera kupindirana basa.
Iine mashandiro eiyo curve kupindirana, inogona kutenderedza iwo anotenderera zvikamu anoumbwa nechero ndege curve contour, kusanganisira iwo matunhu kuburikidza akakodzera kuverenga.
2. High nemazvo zvikamu
Izvo kudikanwa kwezvidimbu zvezvikamu zvinonyanya kutaura nezvekurongeka kunodiwa saizi, chimiro, chinzvimbo, uye pamusoro, pakati pazvo kunyatso kwevhu kunonyanya kureva
pamusoro roughness. Semuenzaniso, iyo yekutenderera chaiyo iri pamusoro, zvikamu zveindasitiri zvine yakakwira cylindricity zvinodiwa;
Cone zvikamu zvine zvakakwirira zvinodiwa kutwasuka, kutenderera uye kutenderera kwetambo; zvikamu zvine zvakakwirira zvinodiwa kumutsara mbiri (yakanaka contour chimiro)
Pane yakakosha chaiyo CNC lathe, iko iko kweiyo geometric contour kunogona zvakare kugadzirwa yakakwira kwazvo.
Kugadziriswa kweyakaomeswa workpiece
Mukugadzira kukuru kwekuumbwa, kune zvikamu zvakawanda zvine saizi hombe uye chimiro chakaomarara. Iko kushanduka kwezvikamu izvi mushure mekurapa kwekupisa idiki.
Izvo zvakaoma kukuya izvo zvakaomeswa zvikamu nekuda kwehukuru hwazvo hukuru,
Tsiva kukuya nekutendeuka kunatsiridza kugadzirisa kushanda.
4.Work chidimbu pamwe yakaoma muitiro
Iyo yekushandira inoda kushandura iyo yekunze denderedzwa, yekupedzisira kumeso, yekugaya groove padivi, kuchera. Rudzi urwu rwekushandira kazhinji runoda matatu maturusi maturusi ekugadzirisa, lathes, michina yekugaya, michina yekuchera, kurodha uye kuburitsa zvinhu kunonetsa zvikuru, unogona kutenga nzvimbo yekutenderera yekugadzirisa.
Cnc kutendeuka muchina zvikamu
Chigadzirwa chinoshandiswa kubata iyo workpiece pane lathe inonzi yekupedzisira lathe.
Lathe zvigadziriso zvinogona kukamurwa muzvikamu zvakajairika uye zvakasarudzika zvigadziriso zvikamu zviviri.
Chigadziko chepasirese chinoreva chiyeuchidzo chimwe chete chinokwanisa kuomesa maviri kana anopfuura maviri marudzi emabasa, semuenzaniso, shaya nhatu-shaya, shaya ina shaya, chitubu chematsutso, uye mandrel yepasirese pane lathe.
Chigadziro chakasarudzika chinogadzirirwa chakasarudzika chebasa rakatarwa reimwe nzira.
Kana ikakamurwa zvinoenderana neakasangana maficha ezvisikwa, pane zvigadziriro zvisingakwanise kugadziridzwa uye chigadziriso chinogona kugadzirwazve, iyo yekupedzisira inonzi modular fixture.
Iyo yekugadzirisa ine yakavimbika mhando inogona kuvimbisa chigadzirwa chigadzirwa, kuvandudza kugadzirisa kushanda uye kuwedzera chiyero chekushandisa kwemuchina maturusi.
Mune lathe basa, mazhinji ekushandisa kweiyo workpiece kana isina cylindrical yekumira.
Nhatu-shaya chuck, yakakamurwa kuita bhuku, magetsi, pneumatic, hydraulic matatu, zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana nemutengi, iwe unogona kusarudza. Kutendeuka nzvimbo pane yakajairwa hydraulic chuck kumwe kushandiswa, iyo yakakwira degree of otomatiki. Inokodzera kugadziriswa batch.
Inofananidzwa neyakajairwa lathes, CNC lathes inowanzo shandisa CNC chishandiso chishandiso, chakakamurwa kuita zvidimbu uye zvimiro zvakatwasuka. Kune zviteshi zvina, zviteshi zvisere, uye gumi nezviviri zviteshi zvekusarudza kubva. Iyo yakawanda zviteshi, iyo yakakwira mutengo. Mhando dzakasiyana dzekutyaira dzinogona kukamurwa kuita hydraulic shongwe uye magetsi emagetsi. Muzhinji, iyo yemagetsi banga yeshongwe mutengo unodhura zvakanyanya. Nekuisa chirongwa muCCC system, iyo CNC system yekubuditsa chiratidzo kune iyo yekucheka shongwe, otomatiki chishandiso shanduko. Kubudirira kwepamusoro.
Iyo muswe uye chuck inoshanda pamwechete kugadzirisa iyo workpiece. Iyo muswe chigaro ine bhuku remuswe chigaro, hydraulic muswe chigaro, pneumatic muswe chigaro.
Chip yekubvisa muchina: Kana nzvimbo yekutendeuka ichigadziriswa, zvimedu zvichatemwa, izvo zviri nyore kuunganidza kwenguva yakareba. Muchina wekubvisa chip unogona kushandiswa pakubvisa chip. Simbi yakasara ichaendeswa kumotokari yekunze kuburikidza neketani mutsara wekubatana kurapwa.